Ifekthri Yokudlulisa: Qalisa bese Uqhuba Uhlelo Lakho Lokumaketha Kokudluliselwa | Martech Zone
Ifekthri Yokudlulisa: Qalisa bese Uqhuba Uhlelo Lakho Lokumaketha Kokudlulisa
NgoMsombuluko, Mashi 22, 2021 NgoMsombuluko, Mashi 22, 2021 Douglas Karr
Noma yiliphi ibhizinisi elinezimali ezilinganiselwe zokukhangisa nezokumaketha lizokutshela ukuthi ukudluliselwa kuyindlela yabo enenzuzo enkulu yokuthola amakhasimende amasha. Ngiyakuthanda ukuthunyelwa ngoba amabhizinisi engiwasebenzisile ayaqonda amandla ami futhi angakwazi ukuwabona nozakwabo badinga usizo engingalunikeza. Ukungasho ukuthi umuntu ongibhekisayo usevele uthenjiwe futhi izincomo zabo zithwala isisindo. Akumangalisi ukuthi amakhasimende abhekisiwe athenge ngokushesha, asebenzise okuningi, futhi adlulisele abanye abangane
92% yabathengi ukudluliselwa kwetrust kubantu ababaziyo.
Abantu bangu-4x maningi amathuba okuthi uthenge lapho kudluliselwa ngumngani.
Izihibe zokudluliselwa zingakwazi yehlisa izindleko zakho ngokutholwa ngakunye kuze kufike ku-34%
Ubunzima, yiqiniso, lokuthi ungalandelela kanjani labo abadluliselwe ekuguqukeni. Ezweni lethu eliku-inthanethi, ukuhanjiswa kungalandelwa kusetshenziswa isixhumanisi esiyingqayizivele. Ukuba nesistimu esabalalisa lezo zixhumanisi futhi ilandelele ngakunye kwalokhu kudluliselwa.
Indawo yokudlulisa iyinkundla yokumaketha yokudlulisela enikezela inkampani yakho isisombululo sokumaketha esizisebenzelayo, esilula, nesiphelele:
Ungakhathazeki ngokubhalisa nokuthi uzokwakha futhi wakhe elinye ipulatifomu. Indawo yokudlulisa iza namakhulu wamakhasi afika ngaphambili akhiwe, alungele ukuhamba ngomakhalekhukhwini ahlukile noma alingisa amakhasi okudluliselwa kwemikhiqizo efakazelwe. Ungenza ngendlela oyifisayo zonke izithombe, ama-logo, ikhophi, kanye nemivuzo kusinye nalezi zifanekiso.
Uma wakho umkhankaso wokumaketha odlulisayo yakhiwe, ungangeza ngesandla abasebenzisi ngedeshibhodi, noma usebenzise abasebenzisi ukuthola izixhumanisi zabo zokudlulisela ngezindlela eziningi:
Via izixhumanisi ezihlukile ezisatshalalisiwe zesikhombi ngasinye
Ngekhodi ye-QR yesikhombi ngasinye
Ngehlelo lokudluliswa olushumekiwe kuwebhusayithi yakho
Ukubika kwakho ku- Indawo yokudlulisa ikwenza ukwazi ukubheka kahle ukukhula kohlelo lwakho lokudlulisela ukuze uhlale wazi ukuthi obani abasebenza kakhulu kuwe. Ungangena kwimininingwane yakho ngedeshibhodi noma uyithumele nge-webhook - ungathumela futhi idatha yakho nganoma yisiphi isikhathi njengefayela le-CSV.
I-Referral Factory njengamanje ihlangana ne I-Hubspot futhi ungeza iSalesforce, i-Intercom, Thenga, Futhi WooCommerce nge-API eza maduze.
Ukudalula: Ngisebenzisa isixhumanisi sokudlulisa esakhiwe ngu- Indawo yokudlulisa kulo lonke lesi sihloko.
Tags: imboni yokudluliselaikhasi lokufika lokudluliselwaisixhumanisi sokudluliselaukumaketha kokudluliselwaipulatifomu yokudluliselaisoftware yokudlulisela